अनमोलले छाडेका हुन् ‘धुपौरे’ ? – Tufan Media News
अनमोलले छाडेका हुन् ‘धुपौरे’ ?
२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १३:११
युवापुस्तामाझ निकै लोकप्रिय अभिनेता अनमोल केसी पछिल्लो पटक फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ मा देखिएका थिए । यो फिल्मको सफलतापछि उनी आफ्नै होम प्रोडक्सनको फिल्म ‘एन्टी हिरो’ को तयारीमा जुटे । तर, स्क्रिप्टमा केही समय लाग्ने भएपछि उनले साम्तेन भुटियाको फिल्म ‘धुपौरे’ साइन गरे, ५० लाख पारिश्रमिकमा । छायांकन सुरु भएपछि २० लाख दिने सर्तमा फिल्म साइन गर्दा उनलाई निर्माताले साइनिङ एमाउन्ट स्वरुप ३० लाखको चेक दिए ।
फिल्ममा अनुबन्ध भएपछि अनमोलले कथावस्तु निकै राम्रो रहेको र आफूले जुवाडेको भूमिका निर्वाहा गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । फिल्ममा आबद्ध भएपछि दिलोज्यान दिने उनी केही दिन छायांकन स्थल खोज्न निर्देशकलाई बाइकमा राखेर धेरै ठाउँ डुबे । दिनहुँ वर्कसपमा घण्टौं समय विताए । फिल्मकै लागि शरीर बनाउन जिममा घण्टौं बेथित गरे । निर्माण टिम पनि अहिलेको ‘हटकेक अभिनेता’ ले फिल्मको लागि गरेको मेहेनतबाट दंग थियो ।
केही हप्तायता निर्माण टिम अभिनेत्रीको खोजीमा थियो । त्यसका लागि अडिसन पनि आह्वान गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म अभिनेत्रीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । फिल्ममा अभिनेता प्रमोद अग्रहरी भने अनुबन्ध भइसकेका छन् । मंसिर दोस्रो हप्ताबाट ‘धुपौरे’ को छायांकन गर्ने तयारी निर्माण टिमले गरेको थियो । तर, अनमोल बाहिरिएको चर्चासँगै फिल्म बन्ने वा नबन्नेमा अन्योलता छाएको छ ।
राजेश हमालले फेरी बिहे
प्रिज्माले पहिलो पटक प्रेमका
भाइरल “बिरे दाईको” पहिलो